Apple na-enyocha ndị ọrụ MacBook 12-inch Esi m na mac
Apple nwere ike na -eche malitegharịa MacBook 12-inch. Ọ tọhapụrụ ya na 2015 wee laa ezumike nka na 2019. Echere m na ị chere na iji iPads Pro laptọọpụ nke nha ahụ abakwaghị uru. Na ha ga -abụ ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ otu ngwaọrụ.
Mana ha agaghị adị otu ọ bụrụhaala na ụfọdụ na -arụ ọrụ iPadOS, na ndị ọzọ na MacOSAgbanyeghị, dị ka ọ dị na iPad Pro ọhụrụ, ha na -ekerịta otu M1 processor. Yabụ na Apple nwere ike ịtụle ya. Ka ọ dị ugbu a, ọ malitela nyocha nke ndị ọrụ MacBook nke anụ ọhịa iri na abụọ ka ha 'jide' mmetụta ha….
Apple na -ebupu a nnyocha afọ ojuju nye ndị nwe MacBook 12-inch nke 2015 kwụsịrị ugbu a, na-ajụ maka mmetụta ha gbasara nha ngwaọrụ, ibu, atụmatụ, wdg.
Apple wepụtara na 12-anụ ọhịa MacBook na 2015 dị ka nnukwu ọkụ na akwụkwọ ndetu dị mkpa maka ndị ahịa chọrọ mbughari. MacBook nke anụ ọhịa iri na abụọ nwere ọmarịcha ihe na-enweghị atụ, yana ezigbo ọmarịcha, ekele ya na bọọdụ nru ububa ya.
Ọ bụ nnukwu ihe ịga nke ọma n'ịzụ ahịa, na -enwe ọmarịcha ihe na mkpa. Emepụtara ya ruo 2019, mgbe Apple kpebiri ịkwụsị ya, site na ịmalite MacBook Air nke anụ ọhịa 13.
Ụlọ ọrụ ahụ chekwara na niche nke anụ ọhịa iri na abụọ nke fọdụrụ efu ga-ejupụta na ya iPad Pro, 11 na 12,9 sentimita. Ụdị iPads ndị a nwere Keyboard Ime Anwansi nwere ike mejupụta oghere ahụ maka obere “akwụkwọ ndetu”.
Mana enwere obere nsogbu: iPads Pro, ọbụlagodi nke ọhụrụ nwere ihe nrụpụta M1, ka na -ebu iPadOS, kama macOS. Aghọtabeghị ya nke ọma ihe kpatara iPad Pro ji kwekọọ na òké, yana otu ihe nrụpụta M1 ahụ nke Apple Silicon ọhụrụ, ka nwere ụdị iOS arụnyere maka nnukwu ihuenyo.
Ọ bụrụ na Apple na-atụle ịregharị ahịa MacBook nke anụ ọhịa 12 nke anụ ọhịa, ọ nweghị ebumnuche imeghari MacOS Monterey na iPad Pro M1, nke ahụ doro anya. Ọ ga -amasị anyị ịmata ihe kpatara ya.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Esi m mac » Mac kọmputa » MacBook » Apple na-enyocha ndị ọrụ MacBook 12-inch
Onye osote Vaughn sonyere na usoro ihe nkiri enwe enwe maka Apple TV +
Mkpuchi elago na -atọ ọchị ma dị irè maka ọgbọ nke abụọ Siri Remote gị